Yintoni oza kuyinika isoka lakho? Funda ukuba ungamothusa njani ngezi ngcamango Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yintoni onokuyinika umfana wakho? Funda ukuba ungamothusa njani ngale mibono
Julayi 8, 2019 0 IiCententarios 1088
Ngaba lusuku lokuzalwa lomfana wakho, usuku lwe-valentine, isikhumbuzo sokuqala okanye omnye umhla okhethekileyo osondela kwaye awazi yintoni onokuyinika umfana wakho? Okulandelayo, ndiza kukunika ezinye zeengcinga oza kuzifumana Isipho esifanelekileyo seqabane lakho kwaye ubamangalise ngomhla obaluleke kangaka.
Wena ngaphezu kwakhe nabani na owaziyo umlingane wakho, ukuba ungumthandi wezemidlalo okanye uthanda ukutya, uwuthanda umculo, uncwadi, umdlalo wokuzonwabisa okanye indlela yakhe yokuphila. Ezi zizikhokelo ezixabisekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuze ufumane esona sipho.
Nika ingqalelo iinkcukacha kuba ngezantsi uya kubona uthotho Izipho zabafana Ngokuthanda okwahlukileyo. Ukusuka ngokuhlekisayo, uthando, izipho zoqobo eziya kwezona zikhethekileyo, zilungele ukuba inkwenkwe yakho ibe nosuku oluhle nolungalibalekiyo. Qhubeka nokufunda!
Ezona zipho zilungileyo kwinkwenkwe yakho
Abafazi abaninzi baphelelwa ziimvo xa loo mhla ubalulekileyo usondela. Mhlawumbi ngenxa yokuba babelane ngexesha elininzi kunye kunye nezipho ezininzi esele zenziwe abayazi ukuba bamothuse ngantoni. Isenokuba lityala lakho okanye isenokungabi njalo. Nokuba kwenzeka ntoni, injongo yomntu wonke iyafana, ukufumana isipho esilungele loo mntu ukhethekileyo.
Okulandelayo, ndiza kwabelana nawe ngokuqulunqwa okungahambelaniyo malunga yintoni onokuyinika umfana wakho. Ndiyakuqinisekisa, uya kuyithimba ingqalelo yakhe kwaye umenze athandane nangakumbi. Qaphela!
Izipho ezintle kunye nezoyilo
Ukuba inkwenkwe yakho iyathandana, ngokuqinisekileyo iya kuzithanda ezo zipho ezintle onokuthi uzenze ngezandla zakho. Ayidingi ukuba ibe ngumhla okhethekileyo wokuba ube nothando kwaye ucinge kunye nesoka lakho. Ukongeza, ezi ntlobo zezipho zibaluleke ngakumbi, zintle kwaye zikhethekile, kuba zenziwe nguwe. Ezinye zeembono zezi:
Ifoto entle Hlanganisa zonke ezo foto zikhethekileyo kwaye wenze ikholaji entle. Ungayakha ukuze ibe nokugqibezela okungcono kwaye unokuyixhoma kwigumbi lakho.
I-albhamu yezithombe ezincinci. Printa ezona iifoto zakho zozibini zincinci kwaye wakhe i-albhamu encinci. Ukwenza ukuba ibe yinyaniso ngakumbi ungongeza amabinzana akhethekileyo.
Yenza a I-keychain enokuqeshwa okucwangcisiweyo ukusebenzisa amakhadi e-12 amancinci ngenyanga nganye yonyaka. Ngokuqinisekileyo, baya kuhlala benento entsha yokwenza.
Ukuhombisa ezininzi iibhokisi ezincinci kwaye ubeke iphepha kwangaphakathi kunye nezizathu ezenza ukuba ufune, mhlawumbi ezinye izinto eziyimfihlo okanye izinto ozithandayo ngayo.
Iibhokisi zeenkumbulo Hlanganisa zonke iinkumbulo ezintle ozenzileyo kunye kwaye uzigcine kwibhokisi ehonjisiweyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, isipho esikhetheke kakhulu seValentine.
Mlungiselele uthando coupons ke angabatshintsha nanini na xa efuna. Nokuba ngowokuncancisa, ukumithisa, mhlawumbi idayisi okanye nantoni na oyaziyo angayithanda.
Isithuba sasekhaya Lungiselela indawo yokumitha. Konke okudingayo ngamakhandlela anevumba elimnandi, mhlawumbi ngumculo okuhlaziya, ikrimu yomzimba kunye nokuhlaziya umzimba.
Izipho zabalandeli bezemidlalo
Ukuba inkwenkwe yakho yibhola ekhatywayo, ibaseball, basketball okanye enye fan yezemidlalo, ezi zipho ziya kulunga:
Wonke umntu othanda ezemidlalo kufuneka abe isikhululo seqela lakho olithandayoUkuba isithandwa sakho asikabi nayo ngoku, lithuba lakho lokuba umothuse.
Mjonge ikepusi ngegama kunye nelogo emele iqela lakho olithandayo. Ilungile xa sele uneflannel.
Izipho zabathandi bokutya
Ukuze ufumane la mfo ukonwabela ukutya okufanelekileyo kwaye uhlala epheka ngcono kunawe, ungamnika:
Isidlo sakusasa esikhethekileyo ukuze ekuvukeni afumane idosi yothando namandla. Thatha icala lakho lobuchwephesha kwaye umangalise ngeresiphi ekhethekileyo.
Isidlo sasemini sangokuhlwa ekhaya, Gqiba usuku ngesidlo sothando ekhaya, ukuhlobisa itafile kwaye utyhile le wayini uyithandayo kakhulu. Ungalibali ukusebenzisa elakho icala
Ipiknikhi yothando, Le yeyona ndlela inomdla kwaye iyindlela emnandi yokuba nengxoxo emnandi kunye nenkwenkwe yakho kwindawo entle.
Iitshokholethi zesiko, Sisipho esikhethekileyo kakhulu esingasokuze siphume kwisitayile.
Ukuba uyayithanda i-barbecning, yinike a ibarbecue, ngokuqinisekileyo uya kuyibonisa phambi kwabahlobo bakhe.
Izipho zabathandi bomculo
Kwimeko apho inkwenkwe yakho iyawuthanda umculo, Nazi ezinye zeembono:
Isixhobo somculo, ilungele loo mntu othandana naye othanda ukunikezela iingoma kuwe.
Intsimbi yesiko ngenxalenye encinci yeeleta zomculo ezichonga ubudlelwane babo. Mhlawumbi ngokuzoba ikatala okanye amanqaku omculo.
Amatikiti ekhonsathi, ilungile ukuba imvumi oyithandayo imalunga nokunikezela ikhonsathi. Ngaphandle kwamathandabuzo, umsitho onokonwaba kunye.
Izipho zabafana abathanda ukwenza umdlalo wokuzonwabisa
Ngaba isithandwa sakho senza nayiphi na into yokuzonwabisa njengokubhala, ukufunda, ukuhlola indalo okanye ukuthatha imifanekiso? Mhlawumbi uyabuthanda ubugcisa, ukuqokelela izinto eziyinyani okanye ukudlala imidlalo? Mhlawumbi olu luhlu lokukhetha lunokukunceda:
Incwadi yohlobo lwakho oluthandayoNgalo mfo othanda uncwadi, ukwazi ihlabathi elitsha kunye nokuphila ubomi obahlukileyo kunye neenkcubeko.
Zifotokopeze kangangoko unakho kwaye uprinte izithombisi ukwenza I-albhamu encinci enemifanekiso eshukumayo. Le yinkcukacha ezimnandi kakhulu zeso sithandwa somfoto.
Incwadi yemibala yabantu abadala, Ilungile ukuba inkwenkwe yakho iyabuthanda ubugcisa. Kwakhona. Yeyona ndlela ibalaseleyo yokukhupha uxinzelelo kunye nokukhulisa ubuchule.
Ukusinda kwikhiti, Kubandakanya ikhampasi, irhasi, impempe, intambo nabanye. Kumntu athandana naye osoloko ephuma esiya kuhlola indalo okanye enze imisebenzi ethile egqithisileyo.
Iinkcukacha ezizodwa, ukuba isithandwa sakho siyathanda ukuqokelela iziqwenga zokwenyani, tyelela ivenkile yakudala y cinga ngononophelo ngento ayigqala njengexabisekileyo okanye emchazayo.
Abanye umdlalo wentenetya, Ilungele ibaleki yakho yomfana.
Ukuba awukaqiniseki nge ungamnika ntoni umfana wakho, Ndiyakuqinisekisa ukuba ngale mibono uyakuba ulungile. Izipho ezingafezekanga zabafana:
Umbhiyozo osondeleyo, jonga igumbi elineebhalbhu ezininzi ezinamanqaku okuxhoma apho uya kubhala khona imiceli mngeni, amahlaya kunye namagama akhethekileyo.
Isipho sesidlo, lungiselela uhlobo lwesidlo namabhokisi abhale umyalezo obumnandi kunye nowodwa okhuthaza ukudibana ngokusondeleyo.
Ikhithi eyenzakalisayoMangalise ngezinye izinto zokudlala onokuzisebenzisa ngasese.
Ikhithi yeebhiya Ukuba iqabane lakho liyathanda ibhiya, esi sipho siya kumvuyisa. Iya kukuvumela ukuba ulungiselele ibhiya kwaye uyonwabele kwisitya sakho sepompo.
Ukuba ufuna ukuba isipho sakho sibe nokuthatyathwa buqu kunye nantlandlolo, nantsi eminye imibono:
Ikhithi yeemvakalelo ze-5, ezi zizipho ze5 eziya kukhuthaza iimvakalelo zakho ze-5. Umzekelo, ukungcamlisa itshokolethi, ukuva ingoma, ukubukela imovie kunye nokunye.
Imisetyenzana yesiqhelo, Mbonele isigqubuthelo ngentetho ekhethekileyo, musa ukulibala ukongeza incasa yesiqhumiso sakho. Ngokuqinisekileyo, uya kulala phantsi ecinga ngawe.
Ikhithi yefilimu yaseMarathon, uhombise ibhokisi kunye nendawo yeopopcorn, iziselo ezihlaziyayo kunye neefilimu zakho ozithandayo. Ilungele nina ukuba nilonwabele olo suku lukhethekileyo kunye.
Isilwanyana sasekhaya Ngaba inkwenkwe yakho isithandwa sesilwanyana? Mhlawumbi unomdla wokuba nesilwanyana? Ukuba ixesha nendawo yakho yiyo enye, ke fumana iqabane elithembekileyo.
Ngalo mfo onayo yonke into:
Uhambo lokumangalisa, nokuba ihlathi, elunxwemeni, isixeko esikhulu okanye idolophu entle. Cwangcisa ukumangalisa kwaye uqiniseke ukuba unexesha elimnandi.
Iseti yobucwebe, umsesane omangalisayo, intamo kunye nesongo. Isipho esikhethekileyo senkwenkwe ekhethekileyo.
Ipeni yemultitool, Yonke indoda ifuna ipeni enqabileyo ukusayina itshekhi kunye namaxwebhu abalulekileyo, kodwa ukuba iyasebenza, ngokuqinisekileyo iya kuyithanda.
Ukuba yindoda akuthethi ukuba awuzimisele ukuzonwabisa. Thatha uhleko ngezi zipho ziyonwabisa kakhulu:
Iisokisi zemifanekiso, Ngaba uyayithanda ipitsa, iihambhu, isilwanyana okanye ibhola? Ke jonga ezinye iisokisi ngeprints zokutya kwakho, izilwanyana okanye into oyithandayo.
Iqela elimangalisayo, cwangcisa ngononophelo lepati emnandi kwaye umeme abahlobo bakho kunye nosapho. Ngokuqinisekileyo, kuya kuthatha isimanga esimnandi kwaye wonwabe kakhulu.
Iiconsoles kunye neevidiyo, ngaphandle kwamathandabuzo, isipho onokuchitha ngaso amaxesha amnandi. Ngapha koko, yindlela entle yokuqhawula ngakumbi nangakumbi, ukuba uyadlala ngokudlala naye.
Siyayazi indlela obaluleke ngayo lo mhla ukhethekileyo kuwe. Ke ngoko, ndifuna ukukucebisa ukuba uphephe izipho ezinjengezilwanyana ezifakiweyo, iintyatyambo kunye nezinto zangasese. Ukuba ufuna ukumnika iimpahla, kubalulekile ukuba umazi kakuhle kwaye akuthandayo.
Zifumane nesisipho esihle kwaye sinyanisekile, kwaye uya kuyibona indlela athandana ngakumbi ngayo nawe. Sixelele, sowusenzile isigqibo? yintoni onokuyinika umfana wakho? Ungalibazisi ukuyabelana nathi, siya kuyonwabela ukufunda izimvo zakho.
1 Ezona zipho zilungileyo kwinkwenkwe yakho
1.1 Izipho ezintle kunye nezoyilo
1.2 Izipho zabalandeli bezemidlalo
1.3 Izipho zabathandi bokutya
1.4 Izipho zabathandi bomculo
1.5 Izipho zabafana abathanda ukwenza umdlalo wokuzonwabisa
1.6 Izipho ezingenasiphako
1.7 Izipho eziyinyani
1.8 Izipho ezizodwa
1.9 Izipho ezihlekisayo
Nguwuphi umdlalo oza kuwenza ukunciphisa umzimba? Dibana neengcebiso ezilungileyo kakhulu
Uyifumana njani kwakhona iakhawunti ye-Instagram? Iingcebiso kunye namaqhinga